Garaad Abshir Garaad Saalax oo ku geeriyooday Sweden iyo Boqor Cabdulaahi oo kahadlay-Dhagayso – Radio Daljir
Garaad Abshir Garaad Saalax oo ku geeriyooday Sweden iyo Boqor Cabdulaahi oo kahadlay-Dhagayso
Luulyo 2, 2016 5:37 b 0
Stocholm, July , 2 – Allaha ha u naxariistee Garaad Abshir Garaad Saalax Maxamed oo ka mid ah issimada sida wayn looga yaqaano Soomaaliya gaar ahaana Puntland ayaa ku geeriyooday magaalada Stocholm ee dalka Sweden.
Garaad Abshir ayaa u geeriyooday xannuun uu in muddo ahba u jiifay, sida ay xaqiijiyeen ehalada garaadka , Garaadka oo 82 sano jir ahaa ayaa ifka ugaga tegey 32 ruux oo isugu jira waxa uu dhalay iyo wixii ay sii dhaleen.
Garaadka ayaa xilka garaadnimo loo doortay sanadkii 1993-dii , isagoona xiligii dowladdii dhexe ee Marxmuum Maxamed Siyaad Bare katirsanaa saraakiishii ciidamada booliska.
Boqor Cabdulaaahi Axmed Cali Dabagooye oo ay soo wada shaqeeyeeen garaad Abshir ayaa ka hadlay taariikhda iyo inta uu ka yaqaanay garaadka.
Boqor Cabdulaahi ayaa dhanka kale kahadlay xarigga sharci darada ee qaar ka mid ah xarumaha Radiyow Daljir dowladda Puntland ay u gaysatay.
Hoos kadhagayso waraysiga oo dhamaystiran
Dowladda Soomaaliya oo bilaabaysa howlgalo kadhan ah ururka Alshabaab.
Afar iyo toban ruux oo la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen weeraro xalay kadhacay Baydhabo